လိပ်ပြာကန် - ဝီကီပီးဒီးယား
လိပ်ပြာကန်သည် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ ပဲခူးမြို့၌ ရှိကာ၊ ၁၄၇၅ ခု ဓမ္မစေတီမင်းလက်ထက်တွင် တူးဖော်သည်။ ရှင်စောပုလက်ထက်တွင် ဓမ္မဓရဘွဲ့ခံ ရဟန်းတော်ကို ဥယျာဉ်ကြီး တစ်ခုနှင့် ကျောင်းကို ဆောက်လှူရာ၊ ဥယျာဉ်မှာ လေပျံဥယျာဉ် ဖြစ်သည်။ ရဟန်းလူထွက်သည် ဓမ္မစေတီမင်းပြုချိန်တွင် ဥယျာဉ်တော်နှင့် ပနံတင့်မည့် ရေကန်ကို တူးစေရာ လေပျံကန်ဟုပင် တွင်သည်။
နောင်သော် လေပျံဥယျာဉ်အနီးမှ လေပျံကန်မှာ လိပ်ပြာကန် ဖြစ်လာသည်။ ၎င်းသည် ၉.၆၇ ဧက ကျယ်၍ အနီးဝန်းကျင် နေထိုင်သူတို့က ကန်ရေကိုသာ အဓိကထား သုံးစွဲသည်။ နှစ်ကြာသော်လည်း ကန်ခမ်းခြင်း မရှိချေ။ လိပ်ပြာကန်ထက်တွင် ရှင်ဥပဂုတ္တပြဿဒ်ဆောင် ကိန်းဝပ်သည်။
လိပ်ပြာကန်နှင့် ပတ်သက်၍ အဆိုတော် ကိုသန်းလှိုင်၏ "ဥဿာလှိုင် ထိပ်ထား"သီချင်းတွင် "ကန်သာလိပ်ပြာ တွေ့လေတိုင်း၊ အတိတ်က ခြောက်လှန့်လာတာမြင်၊ နှစ်ဦးစလုံး အသည်းတွင် ကမ္ဗည်းတင်ထားကြတဲ့ အချစ်စစ်ရဲ့ ဇာတ်ကြောင်းကိုပဲ ပြန်လည်ပြောပြရပြီခင်"စသည်ဖြင့် ပါရှိသည်။
↑ တင်နိုင်တိုး (ဒီဇင်ဘာလ၊ ၂၀၁၃). မြန်မာပြည်တစ်ခွင် လမ်းညွှန်. မဇ္ဈိမစာပေ, ၇၇။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=လိပ်ပြာကန်&oldid=452176" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၃ မတ် ၂၀၁၉၊ ၁၀:၁၂ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။